Ny minisiteran'ny fizahantany namibiana dia nanala ny famonoana elefanta tany an'efitra
Home » Travel Associations News » Ny minisiteran'ny fizahantany namibiana dia nanala ny famonoana elefanta tany an'efitra
Oktobra 24, 2017
Roa amin'ireo omby dimy monja sisa tavela amin'ny elefanta dia nihaza sy novonoina.
Tsaurab sy Tusky, miaraka amin'ny omby tanora hafa, Kambonde, dia voatifitra teo am-pitarainana iraisam-pirenena sy fangatahana mitohy hanakanana ny famonoana - tabataba iray nataon'ny Ministeran'ny Tontolo iainana sy fizahan-tany (MET) Namibianina ho toy ny “famoronana sy ny tsy fahazoana hevitra momba ny famoahana fahazoan-dàlana hamotehana ireo biby miteraka olana ”, ary milaza koa fa ny famonoana biby iray miteraka olana dia" matetika no vahaolana farany aorian'ny fitadiavana vahaolana hafa. "
Saingy, tamin'ny famonoana an'i Kambonde, heverina ho biby niteraka olana, dia tsy izany no izy.
Famonoana olona tsy mahery
Raha ny filazan'ny zanakavavin'ny tompon'ilay trano nitifirana an'i Kambonde dia nanandrana namonjy ny elefanta ny tompon-tany sy ny tompon-tany. “Niezaka mafy izahay namindra toerana ny elefanta, saingy nandà tsy hanome fahazoan-dàlana ny Governemanta.”
Fa kosa, fahazoan-dàlana hihaza no navoakan'ny MET. Saingy tamin'ny andro namonoana azy dia tsy nety nanohy ny famonoana ilay mpihaza satria kely loatra i Kambonde 18 taona. Raha tokony ho izany dia nomena fahazoan-dàlana hihaza amina trondro farany ilay mpihaza mba hitifitra an'i Tsaurab, elefanta any an'efitra fanta-daza amin'ny toetrany malemy paika sy malefaka ary iray amin'ireo omby tanora vao teraka miompy ao amin'ny faritra.
Ny ampitso, nasain'ny MET novonoina ihany koa i Kambonde. Ary, araka ny filazan'ny mpiambina kilalao iray ao amin'ny Sorris Sorris Conservancy, dia nahafaty olona ny fahafatesan'ilay biby. “Voatifitra in-valo ny elefanta taorian'ny nandratran'ny mpihaza azy tamin'ny tifitra voalohany. Ny mpiambina ny MET izay teo amin'ny haza dia tsy maintsy nametraka ny coup de grâce, ”na famonoana olona.
Raha ny filazan'ny mpitondra tenin'ny MET, Romeo Muyunda, dia alefa any ivelany ny biby misy olana mba hovonoin'ny mpihaza mandoa vola, toy ny nitranga tamin'i Kambonde.
Voortrekker, omby malaza 45 taona, Bennie 35 taona ary Cheeky 25 taona izao no omby tokana sisa tavela amin'ny faritra.
Tsaurab any Afrika
Maninona no mamono elefanta tsy fahita any an'efitra?
Taorian'ny fihazana dia manome toky ny "mpanaraka iraisam-pirenena rehetra" ny MET fa "namorona sehatra mandrisika ny vondrom-piarahamonina hiara-miaina amin'ny bibidia". Araka ny hita mazava amin'ny raharaha Kambonde, na izany aza, dia tsy nisy ny ezaka “fiaraha-miaina”, na dia teo aza ny safidy famindrana toerana napetraky ny vondrom-piarahamonina ihany.
Tsy mbola nisy valiny voaray tamina taratasy sy antontan-taratasim-pikarohana be dia be napetrak'ireo mpiara-miasa voakasik'izany, ao anatin'izany ny Elephant Human Relation Aid (EHRA). Ny antontan-taratasy sy taratasy, azo tamin'ny alàlan'ny lodge tao amin'ilay faritra izay nandray anjara tamin'ny fanadihadiana dia niresaka mivantana tamin'ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fizahan-tany Pohamba Shifeta ary nanoritsoritra ny satan'ny fiarovana, ny fihenan'ny mponina, ny sandam-bola, ny lanja ara-tontolo iainana ary ny fahafaha-miasa manodidina ny elefanta an'efitra.
Ny tsy fisalasalan'ny MET handinika ny fomba hafa hisolo toerana ny biby miteraka olana dia vao mainka simba amin'ny tsy fisian'ny fomba fanaraha-maso ara-dalàna izay manamarina raha tena "miteraka olana" ny biby resahina, ary raha ny famonoana olona tokoa no vahaolana farany. Araka ny filazan'ny Fikambanana Earth Namibia, ny MET dia mety hanambara fa biby "manahirana" ny biby dia.
Ireo fisalasalana ireo dia miteraka fisalasalana eo amin'ireo mpiaro ny tontolo iainana, izay milaza fa ny MET dia notarihin'ireo fitaomana avy any ivelany sy ireo mpanao asa soa, toy ny Dallas Safari Club (DSC) Foundation izay nanamora ny fihazana rhino mainty 2013 tany Namibia.
Na teo aza ny valin-kafatra vokatry ny hazalambo voalaza etsy ambony, ny MET an'i Namibia sy ny vondrona mpihaza amboara amerikana DSC tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nanao sonia Memorandum of Understanding izay mikendry ny “fampiroboroboana” ny fihazana fihazonana an'i Namibia ary ahafahan'ny klioban'ny mpihaza manampy amin'ny fanaovana varotra ny firenena taloha ”Rhino, ankoatry ny tanjon'ny fihazana hafa.
Mandà ny elefanta any an'efitra
Manohy manamarina ny famonoana ireo elefanta an'efitra amin'ny alàlan'ny fihazana amboara ny MET amin'ny fandavana tanteraka ny fisian'ireo biby namboarina ireo. Tamin'ny volana septambra, nilaza tamin'ny namibianina i Muyunda fa tsy misy izany antsoina hoe elefanta efitra izany. Nilaza izy fa ny famaritana dia "fitaovam-pivarotana ho an'ny mpizahatany na mpiaro ny tontolo iainana izay toa fikasana hampidi-doza na fongana ireo elefanta ireo."
Raha tsy izany, ny fikarohana siantifika sy nodinihin'ny namana. Ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny Ecology and Evolution tamin'ny 2016 dia nahitana fa tsy ny elefanta an'efitra any Namib dia hafa noho ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy, fa ny fampifanarahan'izy ireo koa dia tsy nafindra ho an'ny taranaka mandimby, fa amin'ny alàlan'ny fampitana ny fahalalana. Ny fahasamihafana ara-morolojika, toy ny vatan'ny elefanta namboarina sy tongotra lehibe kokoa, dia manavaka azy ireo amin'ny Elefanta Savanna mahazatra, izay lazain'ny MET fa izy ireo.
Ny tatitra isan-taona nataon'ny EHRA ho an'ny 2016 dia nampiseho ihany koa fa elefanta miovaova miisa 62 ihany no mijanona ao amin'ny faritry ny ony Ugab sy Huab. Muyunda, etsy ankilany, milaza fa tsy tandindomin-doza mihitsy ny elefanta ao Namibia.
Na dia milaza aza ny MET fa mihevitra ny "lafiny rehetra amin'ny siansa sy ny fikarohana rehefa manome fahazoan-dàlana hihaza karazana", dia tsy noraharahaina ny fiezahana hahazo "siansa sy fikarohana" toa izany.
Ireo trano fandraisam-bahiny marika fampiononana dia manohy ny fisokafana sy fanovana isan-kerinandro miaraka amin'ny prototype ny Marina tokoa
Mitohy ny fanitarana ny Air China any Amerika Avaratra: LA-Shenzen